नेपालकै ठुलो भ्रष्ट्राचारी को हो ? एक दर्जन भ्रष्टहरुको चिरफार - Kantipath.com
नेपालकै ठुलो भ्रष्ट्राचारी को हो ? एक दर्जन भ्रष्टहरुको चिरफार
पछिल्लो समय नेपालमा राजनीति र भ्रष्टाचार एक-अर्काका परिपूरक जस्तै भएका छन् । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र उच्च ओहदामा पुगे पछि सम्पत्ति कमाउने होडबाजी जस्तै देखिएको छ ।त्यस्तै सुडान घोटला काण्ड, लाउडा, चेज र धमिजा लगायतका काण्डहरू नेपालका चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड भनेर चिनिएका छन् । ‘नेपालमा भ्रष्टचारको मूल जरो नै राजनीति हो । राजनीतिकै आडमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ’, ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको भनाइ छ । अधिवक्ता अर्यालका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो ।
तर, कतिपयले अख्तियारलाई बढी अधिकार नदिएकाले पनि भ्रष्टाचार कम हुन नसकेको बताइ रहेका बेला अर्याल भने अख्तियारलाई जतिसुकै शक्तिशाली बनाए पनि भ्रष्टाचार निर्मूल सम्भव नहुने ठोकुवा गर्छन् । ‘अख्तियारलाई बढी अधिकार दिने होइन, भएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । बरु अख्तियारलाई कुन कुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टचार हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार दिएर भ्रष्टचार नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्छ’, अर्यालको दाबी छ । उनका अनुसार भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण नहुने हो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ । अधिवक्ता अर्यालले भनेझैँ २०४६ सालपछि नेपालमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । कतिपय ठूला भ्रष्टाचारमा दलका नेताहरू नै संलग्न भएको र त्यही कारण उनीहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त भएको उदाहरण पनि छ।
सुडान घोटालाको चुरो आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी)सँग जोडिएको छ। ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी हुने, आईएस’ गुणस्तरको हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएको थियो। चेक गणतन्त्रबाट १९ भदौ २०६५मा सुडान बन्दरगाह पुगेका आठवटा एपीसी एक वर्षपछि १९ साउन २०६६ मा प्रहरीको मिसन रहेको न्याला पुगेपछि मात्रै काम नलाग्ने अवस्थाका रहेको रहस्य खुल्यो। त्यसबेलासम्म सम्झ्ौता संशोधन गरी आईएस’ गुणस्तरको प्रावधान हटाइसकिएको र प्रहरी कल्याणकोषले छुट्याएको सबै रकम ठेकेदारको खातामा पुगिसकेको थियो। राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गर्न नमानेपछि प्रहरी कल्याणकोषको पैसा डुब्यो। सुडान मिसनमा प्रहरी कल्याणकोषबाट खर्च गरिएको रु.४५ करोड ४२ लाखमध्ये करिब २९ करोड घोटाला भएको अख्तियारको हिसाब छ। पेश्की र पहिलो दुई किस्ता प्रमनि ओमविक्रम राणा कै कार्यकालमा तथा एक किस्ता प्रमनि हेम बहादुर गुरुङ र दुई किस्ता प्रमनि रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकालमा भुक्तानी भएको हो। तर, प्रतीतपत्र संशोधन गरी भुक्तानीको पूर्ण जिम्मा ब्याङ्कलाई पहिल्यै दिइएकाले गुरुङ र चन्दले त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको मुख्यालयका एक एआईजी बताउँछन्। यद्यपि, गुरुङले त्यहीबीचमा ठेकेदार कम्पनीलाई प्रशंसा-पत्र (लेटर अफ अप्रिसिएसन) भने दिएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता र अनुरोधमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका मिसनमा नेपाल प्रहरीबाट पनि सहभागिता रहँदै आएको छ। ७ असार २०६४मा मन्त्रिपरिषद्ले सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको फर्म्ड पुलिस यूनिट (एफपीयू) खटाउने राष्ट्रसंघको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपकसिंह थाङ्देनको संयोजकत्वमा गठित योजना तथा लागत अनुमान समितिले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ‘मविक्रम राणालाई प्रतिवेदन बुझायो, त्यसकै आधारमा १० असोज २०६४मा बेलायतको अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडसँग मिसनका लागि सामग्री खरीद सम्झौता भयो। सम्झौतामा डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र कम्पनीका प्रतिनिधि शम्भु भारतीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यहाँ जाने प्रहरी एकाइलाई उपकरण तथा हातहतियारसहित पठाउनुपर्छ। पछि राष्ट्रसंघले त्यसको शोधभर्ना गर्छ। हाल खटिएको एकाइका लागि किनिएका एपीसीलगायत सामान कामै नलाग्ने अवस्थामा त्यहाँ पुगे। कम्तीमा २५ वर्ष आयु हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्रसंघले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तर, ती सामान सुरूदेखि नै काम नलाग्ने अवस्थाका भएपछि यसमा अनियमितता भएको आशंका सुरू भएको हो। संसद्को राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र प्रहरीकै आन्तरकि छानबिनबाट समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालियो। तर, कहाँनिर कसरी अनियमितता भयो, यस घोटालामा कोको संलग्न छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन भएको छैन।
सूचीकृत र्फमहरूबाट खरदि गरिएका एपीसीलगायत सामानहरूको भने क्याटलग -परचिय पुस्ितका) मात्रै हेरेर निर्णय लिइएको देखिन्छ। यति मात्रै नभई, एपीसीको गुणस्तर र अन्य सर्तनामा बीचमै परविर्तन गरिएको छ। सुरूमा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी रहने, आईएसओ गुणस्तरको हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको भए आपूर्तिकर्ताले आफ्नै खर्चमा बदली गर्नेसमेतका सर्तमा सझौता भए पनि पछि तिनलाई खुकुलो पारयिो। हतियारबिनाका एपीसी गाडी मात्र ढुवानी भए। झिकिएका हतियारहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् भन्नेबारे सबै पक्ष अनभिज्ञ छन्। १९ भदौ ०६५मा सुडान बन्दरगाहमा एपीसी त पुगे तर ती सबै पुराना एपीसीलाई मर्मत गरी पठाइएका थिए। यस अवधिमा प्रतीतपत्र संशोधन गरी आईएसओ गुणस्तरको प्रावधानसमेत हटाइएको छ। १९ साउन ०६६मा मात्र आठवटा एपीसी नेपाल मिसन रहेको स्थान न्याला पुगे। त्यहाँ निरीक्षण हुँदा नकारात्मक रपिोर्ट आयो। त्यतिन्जेल प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खातामा जम्मा भइसकेको थियो।
ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामै ‘पर्फर्मेन्स बन्ड’बापतको रकम फुत्किइसकेको थियो। सामान गन्तव्यमा पुग्न ढिलाई हुँदा त्यसलाई प्रहरीका तर्फबाट आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुधार गर्नेतर्फ पहल पनि भएन। प्रहरी कर्मचारीको गाँस कटाएर जम्मा गरिएको कल्याण कोषको पैसा मात्रै डुबेन, सुडानमा खटिएका प्रहरीले समेत स्रोत-साधनविहीन अवस्थामा जोखिमपूर्ण तवरले काममा खट्नुपरेको छ। धेरै समयपछिको चर्चा, बहस, अनुसन्धानपछि अन्तत: अख्तियारले ३६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। नांगो आँखाले हेर्दा पनि सुडान प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ। तर, यति ठूलो घोटालामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भने कतै संलग्न नभएको भन्ने कुरा पत्यारलिो लाग्दैन। पूर्वमहानिरीक्षक राणा वा अरू अभियुक्तहरूले रहस्यको यो गुत्थी फुकाउन कति सहयोग गर्छन्, हेर्नैपर्छ। त्यसमाथि अदालतले यसबारेमा कस्तो विवेक गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ।
पुर्वमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार
अख्तियारले विजय गच्छदार विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हाे। अख्तियारले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदारको सा‌ंसद पद स्वत निलम्बनमा परेको छ। गच्छदार सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। अख्तियारले मुद्दामा पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै पूर्व भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी माथि ७ करोड ८ लाख, तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि ७ करोड ८ लाख विगो मागदावी गरिएको छ। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो। ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन्। ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरु हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल तथा पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलविरुद्द भने मुद्दा दायर गरिएको छैन।
गोकुल बास्कोटा टेप प्रकरण
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि भएको कुराकानी सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिए ।राजीनामापछि उक्त विषयमाथिको अनुसन्धान के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा सबैमा छ । अख्तियारलगायतका निकायले उक्त टेपको आधिकारिकता पुष्टी गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन् ।
बास्कोटाले पदत्याग गरेको केही दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त टेप मार्फत आएका विषयवस्तुलाई अप्रमाणित भनिदिए ।जसबाट अनुसन्धान प्रक्रिया नै धरमराउने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जियो । त्यसपछि अडियो टेपमा आएका कुरा कत्तिको विश्वासिलो प्रमाण हो भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ । अडियोलाई नै आरोपको मुख्य प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट वहस पनि भइरहेको छ ।प्रमाण कानुनका विज्ञहरु भने प्रमाण ऐनले अडियो रेकर्डलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा उल्लेख नगरेको तर अडियोको आधारमा अन्य तथ्यहरु अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने बताएका छन् । आरोप लाग्नु मात्रै अपराध साबित नहुने कानुनी मान्यता छ ।
यसर्थ अडियो टेप रेकर्डलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार बिना अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा भोलि अदालतले कमिसनको अडियो टेप बास्कोटाकै हो र सो रेकर्ड भ्रष्टाचारकै निम्ति गरिएको थियो त भन्ने प्रश्न उठायो भने अख्तियारप्रति नै अविश्वास बढ्ने भएकाले अख्तियारले पर्याप्त छानबीन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अख्तियारले भने टेप रेकर्ड सत्य होकी होइन भन्ने निक्र्यौलका लागि छानबीन भइरहेको र त्यसका लागि गोपनियता अप्नाउनु पर्ने भएकाले काम पूरा नहुन्जेल प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताएको छ ।राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सो टेप रेकर्डको सत्यता जाँच्ने प्रयोगशाला नभएकाले प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सो टेपको सत्यता जाँच्ने बताइएको छ । तर प्रधानमन्त्रीलगायतबाट जसरी अभिव्यक्तिहरु आएका छन् त्यसले कतै अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभाव पार्छकी भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ !
सूचीकृत र्फमहरूबाट खरदि गरिएका एपीसीलगायत सामानहरूको भने क्याटलग -परचिय पुस्ितका) मात्रै हेरेर निर्णय लिइएको देखिन्छ। यति मात्रै नभई, एपीसीको गुणस्तर र अन्य सर्तनामा बीचमै परविर्तन गरिएको छ। सुरूमा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी रहने, आईएसओ गुणस्तरको हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको भए आपूर्तिकर्ताले आफ्नै खर्चमा बदली गर्नेसमेतका सर्तमा सझौता भए पनि पछि तिनलाई खुकुलो पारयिो। हतियारबिनाका एपीसी गाडी मात्र ढुवानी भए। झिकिएका हतियारहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् भन्नेबारे सबै पक्ष अनभिज्ञ छन्। १९ भदौ ०६५मा सुडान बन्दरगाहमा एपीसी त पुगे तर ती सबै पुराना एपीसीलाई मर्मत गरी पठाइएका थिए। यस अवधिमा प्रतीतपत्र संशोधन गरी आईएसओ गुणस्तरको प्रावधानसमेत हटाइएको छ। १९ साउन ०६६मा मात्र आठवटा एपीसी नेपाल मिसन रहेको स्थान न्याला पुगे। त्यहाँ निरीक्षण हुँदा नकारात्मक रपिोर्ट आयो। त्यतिन्जेल प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खातामा जम्मा भइसकेको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामै ‘पर्फर्मेन्स बन्ड’बापतको रकम फुत्किइसकेको थियो। सामान गन्तव्यमा पुग्न ढिलाई हुँदा त्यसलाई प्रहरीका तर्फबाट आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुधार गर्नेतर्फ पहल पनि भएन। प्रहरी कर्मचारीको गाँस कटाएर जम्मा गरिएको कल्याण कोषको पैसा मात्रै डुबेन, सुडानमा खटिएका प्रहरीले समेत स्रोत-साधनविहीन अवस्थामा जोखिमपूर्ण तवरले काममा खट्नुपरेको छ। धेरै समयपछिको चर्चा, बहस, अनुसन्धानपछि अन्तत: अख्तियारले ३६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। नांगो आँखाले हेर्दा पनि सुडान प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ। तर, यति ठूलो घोटालामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भने कतै संलग्न नभएको भन्ने कुरा पत्यारलिो लाग्दैन। पूर्वमहानिरीक्षक राणा वा अरू अभियुक्तहरूले रहस्यको यो गुत्थी फुकाउन कति सहयोग गर्छन्, हेर्नैपर्छ। त्यसमाथि अदालतले यसबारेमा कस्तो विवेक गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ।
बास्कोटाले पदत्याग गरेको केही दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त टेप मार्फत आएका विषयवस्तुलाई अप्रमाणित भनिदिए ।जसबाट अनुसन्धान प्रक्रिया नै धरमराउने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जियो । त्यसपछि अडियो टेपमा आएका कुरा कत्तिको विश्वासिलो प्रमाण हो भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ । अडियोलाई नै आरोपको मुख्य प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट वहस पनि भइरहेको छ ।प्रमाण कानुनका विज्ञहरु भने प्रमाण ऐनले अडियो रेकर्डलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा उल्लेख नगरेको तर अडियोको आधारमा अन्य तथ्यहरु अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने बताएका छन् ।
आरोप लाग्नु मात्रै अपराध साबित नहुने कानुनी मान्यता छ । यसर्थ अडियो टेप रेकर्डलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार बिना अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा भोलि अदालतले कमिसनको अडियो टेप बास्कोटाकै हो र सो रेकर्ड भ्रष्टाचारकै निम्ति गरिएको थियो त भन्ने प्रश्न उठायो भने अख्तियारप्रति नै अविश्वास बढ्ने भएकाले अख्तियारले पर्याप्त छानबीन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
Previous Previous post: एउटै खेलमा आठ खेलाडीलाई रातो कार्ड !
Next Next post: भारतमा कोरोनाका कारण मुत्यु हुनेको संख्या २ पुग्यो
नेता कार्यकर्ताहरूलाई उद्धार कार्यमा जुट्न पार्टी र क्रान्तिकारीको निर्देशन
शक्तिकाे आडमा डोजर लगाएर दलितका घर भत्कायाे, सरकारी निकाय माैन !
नेकपा सचिवालय बैठक ४५ मिनेट ढिलो सुरु, छिर्‍यो रुकुम घटना
दलित सदस्य महिला भूमिकाविहीन
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २९ पुग्यो
भारतमा महिलाले किन गर्भाशय फाल्दैछन् ? कारण यस्ताे छ…
कांग्रेसकी सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा
बाढीपहिरो अपडेट : मृत्यु हुने ३१ पुगे, ४३ जना सम्पर्कविहिन
पीएकी श्रीमतीलाई अंगालो हाल्दा मन्त्रीलाई निल्नु न ओकल्नु !